မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IX | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IX	11
Posted by Kyaemon on Jun 15, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different | 11 comments
၁၉၈၆ ကစပြီး ဗဟိုဦးစီးစံနစ်ကိုစွန့်လွှတ်ကာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကို
အားပေးလာတယ်၊ ၁၉၉၇ အာရှ စီးပွါးရေးပြသနာဖြစ်ချိန် ကလွဲလို့ နှစ်စဉ် ၆% ထက်မနဲ တိုးတက်ခဲ့တယ်၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကာလ မှာဆိုရင် ဖျမ်းမျှအားဖြင့် ၈ % နှစ်စဉ်တိုးတက်လို့
အာရှမှာ တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံး ထဲကတနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့တယ်၊
သို့သော်အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေမပြည့်စုံမဖူလုံသေးပါ၊ အထူးသဖြင့်နယ်မှာပါ၊
ပင်မ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နဲ့ မြေတယ်လီဖုန်း လိုင်းတွေက မဖွံ့ဖြိုးသေး ပါ၊
လူဦးရေ ၈၃ % တို့က လျှပ်စစ် ကိုလက်လှမ်းမှီနိုင်သုံးစွဲနိုင်တယ်၊
လူဦးရေ ၇၃ % ကလယ်သမားဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့က တနိုင်ငံလုံးဝင်ငွေ ရဲ့ ၂၅ % ကိုရှာဖွေပေးကြတယ်၊
လာအိုနဲ့မြန်မာ တဦးချင်း ဝင်ငွေ နှိုင်းယှဉ်ဇယား
အမှတ်စဉ် ၁၄၆ လာအို ရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေ က ၃၁၀၀ US$
အမှတ်စဉ် ၁၅၈ မြန်မာ ရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေ က ၁၇၀၀ US$
ဆိုတော့ လာအို က မြန်မာထက် ၁၄၀၀ US$ (၈၀ %) သာနေတယ်၊
(နောက် တဆ နီးပါးသာနေပါတယ်၊
(၁၉၉၇ က စ ပြီး ၂၀၁၆ အထိ တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲလာပုံကိုအောက်ဆုံး
အပိုင်း မှာ လဲ ထပ်မံတင်ပြထားတယ်)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်တာလဲ ဒီအချိုး( ၁.၈) နီးပါးဘဲ၊
လာ အို အမှတ် ၈၈ က ၁၂၂၄၂ GWh
မြန်မာ အမှတ် ၁၀၄ က ၇၁၄၄ GWh
အဆင့်။…………. နိုင်ငံ။ …………………………လျှပ်စစ်အင်အား ။ ……..ထုတ်လုပ်တဲ့ နှစ်၊
၂၀၀၀ မှ ၂၀၁၄ ထိ နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့ရောင်းချ
လိုက်တဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဇယား (ကီလိုဝပ်နာရီ)
၂၀၁၃ နဲ့၂၀၁၄ အကြားမှာ ၂၅၃၇ ထိ အဆ ပေါင်း ၅ ဆ
မှ ၇ ဆ ထိ ခုံပျံကျော်လွှား တိုးပြီး တင်ပို့ နိုင်ခဲ့တယ်၊
စရာဘူရိ ရေကာတာ Xayaburi Dan
စရာဘူရိ ရေကာတာ လုပ်ဘို့ချေးငွေ US $ ၅၃၁. ၇ သန်း ကို ယိုးဒယား ကုမ္ပဏီ Karnchang PLC က ရခဲ့တယ်
၁၂၈၅ MW လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်နိုင်မယ်၊
US$ ၃.၅ ဘီလျံတန် ဒီရေကာတာက ၆၀ % ပြီးနေကြောင်း နိုဝင်ဘာ လတွင်
အစီရင်ခံပြီးပါပြီ၊ယိုးဒယား နဲ့ ၃၁ နှစ် စာချုပ် ချုပ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာက်အားရောင်းမယ်
အောက်ပိုင်း မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ မှာ ဒီရေကာတာကိုလုပ်ဘို့ ပဌမ ဦးဆုံး
အဆိုပြုတာဖြစ်ပြီး၊ “ဘက်ထရီ အိုး ကြီး” လို လာအို က ဒီ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်
ဒေသကြီးကို ဓာတ်အား ဖြန့်ချီတင်ပို့ရောင်းချမှာ ဖြစ်တယ်၊
ဒီဒေသကြီးအတွက် လုပ်ဘို့ရေကာတာ ၁၁ လုံး အနက်က ၁ လုံးပါ၊
ဗီယက်နမ် နဲ့ကမ္ဗောဒီယား တို့ကိုလဲရောင်းမယ်ဖြစ်သော်လည်းယိုးဒယားကို
လာအို မှာ အစောဆုံး ဆောက်လုပ်တဲ့ရေကာတာ က Nam Ngum 1 ဖြစ်တယ်၊
၁၉၇၁ ခုကထဲက ဂျပန်အကူအညီနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်၊
တောင်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်း စွပ်စွဲသူတို့လဲရှိတယ်၊ ဂျပန်ကျတော့ဒီလို
မစွပ်စွဲဘဲ တရုပ်ကိုဘဲ မဲနေကြတယ်)
လာအို အလယ်ပိုင်းက Theun-Hinboun စီမံကိန်း အရ တည်ဆောက်တဲ့လျှပ်စစ်ထုတ်
ရေကာတာတွေ ဟာ တော်တော်အောင်မြင်တယ်၊
Theun မြစ် နဲ Hinboun့  မြစ်ကို လိုဏ်းဂူရေကြောင်းဖောက်ပြီးလုပ်ယူရတယ်၊
၁၉၉၈ နဲ့ ၂၀၁၂ မှာနှစ်ဆင့်လုပ်ပြီး ၂၂၀ MWh အင်အား ထုတ်ပေးတယ်၊
နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့ရောင်းချဘို့ ပစ္စည်းသိပ်မရှိလှတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုရေလျှပ်စစ်
၂၂၀ MW ထုတ် တာဘိုင် Theun Hinboun Powerhouse မှာနောက်တလုံးကို၎င်း၊
၆၀ MW ထုတ် စက်ရုံတခု ကို မြစ် ဆွယ် မှာ ၎င်း၊
ဒိအပြင် နောက်ထပ်လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ် ရေကာတာ၂၁ လုံးကိုတည်ဆောက်ဘို့
လာအို အစိုးရက သဘောတူခွင့်ပြုထားတယ်၊
၂၀၁၂ – ၂၀၂၂ အတွင်းမှာ တနှစ်ကို ဓာတ်အားထုတ် ရေကာတာ ၂ လုံး ဆောက်လုပ်မယ်၊
နိုင်ငံရဲ့စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ဘို့ နိုင်ငံခြားငွေက အရေးပါအရာရောက်တယ်
၎င်းငွေကိုရနိုင်တဲ့နည်း ဟာ အိမ်နီးချင်း ယိုးဒယားကိုလျှပ်စစ်ရောင်းတာ က အဓိကဖြစ်တယ် လို့
အနီးအနား မ ဝေး လံ လို့ လာအိုက ယိုးဒယားနဲ့ ဗီယက်နမ် တို့ကို
ထို့အတူ လာအို ရဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်နဲ့မြို့များအတွက်
စွမ်းအားရယူသွားတာက “နှပ်ချ” သွားတယ်လို့အဆိုးမြင်
သူတွေကစွပ်စွဲကြတယ်၊ ဒီလိုပြောစတမ်း ဆိုရင်
ယိုးဒယား နဲ့ဗီယက်နမ် တို့ကလာအိုကို”နှပ်ချ” သွားတယ်၊
တဖန် လာအိုကလဲတရုပ်ကို”နှပ်ချ” သွားတယ်လို့ဘဲ ဆိုရမလား?
ထိပ်တန်းကပြင်သစ် ဂျာမဏီ ကနေတာ ပါ၊
နော်ဝေ က နံပါတ် ၈ တရုပ် က ၁၂ ယူအက်စ် က ၁၉
ရေမှလျှပ်စစ်စွမ်းအားကို အဘိုးတန် ကုန်ပစ္စည်း (ရွှေဖြူ) လို
နိုင်ငံတကာက သန်းချီပြီး ဝယ်ယူရောင်းချ ဖလှယ်ကြတယ်၊
အကျိုးရှိစွာ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် အသုံးပြုကြတယ်၊
ဒီလိုမမြင်ဘဲနဲ့ မ စင်နဲ့နှိုင်းလောက်အောင် အ ဆိုးကြီးဘဲ
တရုပ် အိန္ဒိယ ဂျပန် ကရှေ့မှာပါ၊
တရုပ် ကအိန္ဒိယ နဲ့ဂျပန် ထက် ၄ ဆ ၆ဆ ကြီးတယ်
တရုပ် ကအိန္ဒိယ ဂျပန် နဲ့ကျန် အာရှနိုင်ငံအားလုံးပေါင်း တို့ထက် ရေအားလျှပ်စစ်ပိုထုတ်နိုင်တယ် Laos
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေအတွက် လျှပ်စစ်ဖြန့်ချီပေးမဲ့
“ဘတ်ဒရီအိုးကြီး” ဖြစ်အောင် လာအိုအစိုးရ ကကြိုးပမ်းနေတယ်ဒီလို အောင်မြင်ထွန်းကားဘို့ ယိုးဒယား တရုပ် ဗီယနမ် မလေးရှား
ကဝိုင်းဝန်းရင်းနှီးလုပ်ဆောင်လျက်ပါ၊ကမ္ပာ့ဘဏ် အာရှဘဏ်နဲ့ဂျပန် ပြင်သစ် နော်ဝေ မှ ကုမ္ပဏီတွေလဲ
ပါဝင်ဘို့နေရာယူနေကြတယ်၊The Lao government hopes to transform the country into “the battery of Southeast Asia” by exporting the power to Thailand and Vietnam. The companies and investors driving the current Lao hydro-boom hail from Thailand, China, Vietnam and Malaysia, though the World Bank, the Asian Development Bank and companies from Japan , France and Norway remain on the scene.
လာအိုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းမှာ ရေကာတာ အကြီး အသစ် ၇၂လုံး
ဆောက်ဘို့ဖြစ်တယ်၊ ၎င်းအနက် ၂၅ လုံး က အဆင့်မြင့် စီမံတဲ့
အဆင့်ရောက်ကြပြီး၊ အောက်ပိုင်းမဲခေါင်ဒေသကြီးအတွက် ၉ လုံး
ရေကာတာ ၉ လုံး အတွက် ရင်းနှီးကြမဲ့အဖွဲ့တွေ အနက် တရုပ်က ၊ရှေ့ပြေးဖြစ်နေတယ်
မဖွံ့ဖြိုးဘဲ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ရောက်နိုင်ငံများ မှ
၂၀၂၀ မှာ ရုန်းထွက်နိုင်အောင် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကို
လာအိုအစိုးရက ၁၉၉၆ မှာ သတ်မှတ်လိုက်တယ်၊
လူတွေကိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝ မှ မြှင့်တင်ဘို့ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်အတွက်
၁၉၉၅ မှာဆိုရင် ပြည်သူတွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကို လက်လှမ်းမှီသုံးနိုင်တာ က ၁၆ % သာ
ဖြစ်ပြီး၊၂၀၁၂ ကျတော့ ၇၇ % သော ပြည်သူက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလက်လှမ်းမှီသုံးစွဲလာကြတယ်၊
ငွေတွေကလဲ အချိုးအားဖြင့် ၃ချိုး ၂ချိုး တော်တော်ကြီးတဲ့အပိုင်းမှာအမြဲ နေရာယူတာက ၂၀၀၈ က စ တာ (ခုထိ) ပါ၊(လျှပ်စစ်လဲ ပြိုင်တူတိုးရောင်းရလို့၎င်းရဲ့ ၃ချိုး ၂ချိုး ကိုဆက်ထိန်းနိုင်)Access to electricity across Laos has increased from 16% in 1995 to 77% in 2012. Since 2008 electricity sales have accounted for overathird of all exports, even as exports of other products have risen significantly.
၁၀၇၀ MW ရေလျှပ်စစ်ထုတ် Nam Theun2Power Station ကိုအခမ်းအနားနဲ့ဖွင့်
ထုတ်လုပ်တဲ့ အင်အား ၉၀ % ကိုယိုးဒယားသို့ရောင်းမယ်၊
လာမဲ့ ၂၅ နှစ်မှာ နှစ်စဉ် သန်း US $ ၈၀ မှန်မှန် ရမယ်၊ တဘက်မှာလဲ
ပြည်တွင်းသုံးရဲ့ ၂၀ % ဓာတ်အား ကိုလဲဖြည့်တင်းနိုင်တယ်၊
၃၅၀ မီတာ (၁၁၄၈ ပေ၊ အထပ် ၇၅ မှ အထပ် ၉၀ လောက်) မြင့်တဲ့ Nakai ကုန်းမြေမြင့် ကနေ လိုဏ်ဂူရေကြောင်း
ဖောက်ကာ အောက်နားက Gnommalath Plain မြေပြင် သို့ ရေသွယ်ပြီးရေအားလျှပ်စစ်လုပ် ရင် ၆၀၀၀ GW ဓာတ်အားကိုထုတ်လုပ်နိုင်မယ်၊
လာအိုစီးပွါးရေး က အားတက်သရော တိုးတက် လျက်ရှီတယ်၊
ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲနိုင်ငံတွေအကြားမှ လာအိုက ရုန်းထွက်နိုင်ပြိ No More among the World’s Most Poor: The Booming Economy of the Lao People’s Democratic Republic
လျှပ်စစ်အား အထူးလိုအပ်ပြီး ငတ်ပြတ်နေတဲ့ ယိုးဒယား အတွက်
ဘန်ကောက် မြို့ပြင် လူနေအိမ်ကွက်သစ် အဆောက်အဦးတိုး၊
ယိုးဒယား ပြည်နယ်တွေသုံး တဲ့လျှပ်စစ် ပမာဏ ထက်
ဘန်ကောက်ကဈေးပွဲတန်း တွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုသုံးလာ၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ် စု နှစ် မှာရေအား လျှပ်စစ်ကို အရှိန်ပြင်းစွာ
၂၀၃၀ ရောက်ရင် ရေအားလျှပ်စစ်ကို လေး ဆ ဖြစ်လာအောင် လာအိုကရည်ရွယ်
Comments: The Nam Ngum Dam isahydroelectric dam on the Nam Ngum river,amajor tributary of the Mekong in Laos. It is the oldest dam in Laos, and its reservoir is the largest water body in the country. Photo: Wiki
လာအို၊ တရုပ်ယူနန်ပြည်နယ်၊ ဗီယက်နမ်, ယိုးဒယာ၊, ကမ္ဘောဒီယား
တို့စုပေါင်းဖလှယ် ကုန်စည်ဒိုင် လို လျှပ်စစ်အားကိုဖလှယ် ဘို့လေ့လာ
လာအိုကနေပြီး ယိုးဒယား မလေးရှား မှတဆင့် စင်ကာပူ ကိုလဲ ဓာတ်အားပို့ဘို့လေ့လာနေတယ်၊
လာအိုနိုင်ငံရဲ့အကျယ်အဝန်း က မြန်မာ ရဲ့ ၃၅ % ၊
၃ ချိုး ၁ ချိုး လောက် ဘဲ၊
၁၉၈၀ လောက်ကဆိုရင် မြန်မာ နဲ့လာအိုတို့က မတိမ်းမညိမ်းပါ၊
နောက်ပိုင်မှာ လာအိုကပိုမို ထုတ်နိုင်လာတယ်၊
လာအိုက ၁၁ TWh အဆင့်ကိုထိုးဖောက်နိုင်ပေမဲ့မြန်မာက ၇.၅ TWh လောက်အဆင့်ကိုဘဲမှီနိုင်တယ်
နှစ် လာအို မြန်မာ
၂၀၀၀ ……၁၃၀၀ ……၁၂၀၀
၂၀၀၇……. ၂၀၀၀ ……၁၂၀၀
၂၀၀၈……. ၂၁၀၀ ……၁၂၀၀
၂၀၁၀ ……..၂၁၀၀…… ၁၂၀၀ ၂၀၁၁ ……..၂၇၀၀ ……၁၆၀၀
US $ နဲ့ပါ
နော်ဝေလို လာအို က ရေအားလျှပ်စစ် တိုးထုတ်လုပ်နိုင်
လို့ ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းလဲအောင်၊ အိမ်နီးနားချင်း
နိုင်ငံတို့ကိုလဲ ပိုမိုရောင်းချနိုင်၊ ဒါတွေကြောင့် တဦးချင်းဝင်ငွေ
၁၉၉၇ က လာအို နဲ့ မြန်မာ တူတူ လောက် ကနေ
လာအိုကတဖြေးဖြေး ပိုပို ရလာလို့ နောက်ပိုင်းတွင်
လာအိုက မြန်မာထက် ၈၀ % ပိုရလာ ပြီး မြန်မာ
ရဲ့ ၁၈၀ % ဖြစ်လာ၊နောင်လဲဒိထက် သာမယ်ဆိုတာ
GDP – per capita purchasing power parity – $1,150 (1996 est.) http://www.photius.com/wfb1997/laos/laos_economy.html SOURCE: 1997 CIA WORLD FACTBOOK Laos Economy 2000 GDP – per capita: purchasing power parity – $1,300 (1999 est.)
http://www.allcountries.org/wfb2005/laos/laos_economy.html SOURCE: 2005 CIA WORLD FACTBOOK GDP – per capita: purchasing power parity – $1,900 (2004 est.) Laos Economy 2010 http://www.workmall.com/wfb2010/laos/laos_economy.html SOURCE: 2010 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES GDP – per capita (PPP): $2,100 (2009 est.) $2,100 (2008 est.) $2,000 (2007 est.) note: data are in 2009 US dollars Laos Economy 2016
http://www.theodora.com/wfbcurrent/laos/laos_economy.html SOURCE: 2016 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES GDP – per capita: $3,100 (2013 est.) country comparison to the world: 176 $2,900 (2012 est.) $2,700 (2011 est.) Burma Economy 1997 http://www.photius.com/wfb1997/burma/burma_economy.html GDP – per capita purchasing power parity – $1,120 (1996 est.) Burma Economy 2000 GDP – per capita: purchasing power parity – $1,200 (1999 est.) Burma Economy – 2005 http://www.allcountries.org/wfb2005/burma/burma_economy.html GDP – per capita: purchasing power parity – $1,700 (2004 est.) Burma Economy 2010 http://www.workmall.com/wfb2010/burma/burma_economy.html GDP – per capita (PPP): $1,200 (2009 est.) $1,200 (2008 est.) $1,200 (2007 est.) note: data are in 2009 US dollars Burma Economy 2016 http://www.theodora.com/wfbcurrent/burma/burma_economy.html
SOURCE: 2016 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES GDP – per capita: $1,700 (2013 est.)
country comparison to the world: 201 $1,600 (2012 est.) $1,600 (2011 est.) note: data are in 2013 US dollars လာအိုနဲ့မြန်မာတဦးချင်းဝင်ငွေ ပိုပိုပြီး ကွာဟ လာမှာဖြစ်လို့
အရေးကြီးတဲ့သော့ချက် အာ မ ခံချက် တခု မ ဟုတ် ပါလား?
(အထပ် ၂၀ တိုက် ကို “စ လုံရေ စ” တာ မဟုတ်ဘဲ ၁၂ ထပ် လောက်
ဆောက်ပြီးတဲ့အဆင့် မှာ စွန့်လွှတ် သလို” ငွေတွေ ရော်” အလကားလွှင့်ပစ်
အမတ်တွေကိုလစာ အပြည့်တောင် ပြန်တင်ပေးလို့ရ
၁၉၈၀ ၁၉၉၁၊ ၂၀၀၀၊၂၀၀၇၊ ၂၀၁၄ နှစ်များ အတွင်း
လာအို၊ မြန်မာ၊ တရုပ်၊ဂျပန်၊အိန္ဒိယ စတဲ့ အာရှနိုင်ငံ
ထုတ်ဓာတ်အားပမာဏအခြေပြဇယား၊( TWh နဲ့ပါ)
၂၀၁၄ ဇယား ကို ကြည့်ရင် လာအို က တော်တော်တက်လာတယ်
လာအို ၉ TWh မြန်မာ ၆ TWh
၁၉၈၀ ဇယားကိုကြည့်ရင်ဂျပန်ကတချိန်တုန်းက ရှေ့ပြေးပေမဲ့
ကျန်ဇယား မှာ တရုပ်ကဘဲဆက်တိုက်ရှေ့ဆောင်ကာ
၂၀၁၄ မှာဆိုရင် တရုပ် ၁၀၂၉ TWh ဂျပန် ၈၀ TWh ( ဂျပန်ရဲ့ ၁၂.၅ ဆ ဖြစ်လာ)
ပုံမှန်ဓာတ်အားရလို့ စက်ရုံတည်ထောင်ဘို့နိုင်ငံခြား ရင်းမှုနှီးငွေကိုဘိတ်ခေါ်တာလဲ ပိုပြီးအောင်မြင်တွင်ကျယ်
လွန်စွာမှဆိုးဝါးတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ ပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်၊
မြန်မာတွေကအလုပ်ရှာမရလို့ယိုးဒယား မလေးရှား အင်ဒိုနီးရှား စင်ကာပူ စသဖြင့်
သန်းချီပြီး “ပြေး” ရတယ်၊
ရေလုပ်ငန်း သားငါးလုပ်ငန်း လုပ်ရာမှာ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်ခံရတယ် သတ်ခံ
ရပြီး ပင်လယ်ထဲ ခွေးလိုဝက်လိုပစ်ချခံရတယ်၊
မိုးမမြင်လေမမြင် သံလှောင်အိမ်ထဲ မှာ ကြောက် ကြောက်နဲ့ စံမြန်းရတယ်၊
အနှစ် ၂၀ ကျော်ပြန်လမ်းမရှိ “မဲဇာ” တ ကျွန်းကျခံရတယ် လစာမရ အလကားကျွန်လဲခံ ရိုက်လဲခံရတယ်
မကြာခင်ကသတင်း အရယိုးဒယားမှာ မကောင်းတဲ့အသက်မွေး
ဝမ်းကျောင်းနဲ့ ဖမ်းခံရသူ ၁၂၁ ဦး အနက် မြန်မာ က ၁၀၈ ဦး ရှိတယ်၊
ဒါတွေနဲ့စာရင် မြစ်ဆုံကစိတ်ကူးယဉ်ဆိုးကျိုး စိတ်ကူးယဉ်ငလျင်က မပြောပလောက်ပါ၊
ရေကြည်ရာမျက်နုရာ ဆိုတာလို ပညာတတ်တွေပြည်ပြေးခဲ့ရာ
လူတော်တွေသိပ်မကျန်ပါ၊ ဓာတ်အားမမှန် အလုပ်လဲမရ ရင်
IMHO and generally speaking the elite လူတော်လူကောင်းfrom Burma had mostly emigrated overseas.
၁၊လျော်ကြေးအတွက် ကိုယ့်အိပ် ထဲက အသပြာ တပြားတချပ်ကမှ
၂ က၊ လျှပ်စစ် မ ရလို့ စက်ရုံမလည် အလုပ်၊လဲ မရတာ၊
ခ,အဲ ကွန်းမရလို့ အပူဒဏ်ခံရတာ၊,မီးမလာလို့ကျောင်းစာမဘတ်နိုင်တာ၊
—- ဂ၊ ဓာတ်အားမရှိလို့ ညညအိပ်ပျက်ခံကာ
မီးအလာ ကို လိုက်စောင့်ပြီးအလုအယက်ရေလိုက်တင်ရတာ,, —–
ဒါတွေကို “ဘဝမေ့”ပြီး ကိုယ်ချင်းမစာ လိုက်လိုက်အာ
၃၊ အနောက်နိုင်ငံရဲ့စစ်အေးဝါဒဖြန့်တာကို ယုံလွယ်တဲ့လူတမျိုး ရှိတယ်၊
However, some brainy expat people themselves are blinded by အမုန်းနဲ့အညှိုး grudges and confused by
kai says: ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် နည်းနည်းလန့်လာပြီ…။
မြန်မာတွေအပေါ်ထားတဲ့.. စေတနာလည်းမြင်ရပါတယ်…..။ ကျေးဇူးကမ္ဘာ…။
Kyaemon says: သူကြီးခင်ဗျား၊
နဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန email
၃၊ လွှတ်တော် နှစ် ရပ် website / email
၄၊ အစိုးရ သတင်းစာ များ website
အပြည့်အစုံ ဖြစ်စေ၊ အကျဉ်း ဖြစ်စေ၊ နိဒါန်းပျိုး တပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ဖြစ်စေ၊
ဆောင်းပါး တပုဒ် ဘဲဖြစ်စေ ပေးပို့ပြီး ၎င်းတို့နဲ့အတူ မြန်မာဂေဇက် Links ပါ တွဲပေး
kai says: ကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်..။
မြန်မာပြည်မယ်ဖြစ်နေတာက.. ဘရိန်းဝရ်ှခံထားရတဲ့.. လူထုထဲက တချို့က အတင်းကန်နေတော့… ပညာရှင်တချို့နဲ့.. အစိုးရလည်း သိသိနဲ့.. လုပ်ရခက်နေပုံပါပဲ..။
ဦးကြောင်ကြီး says: တလုပ်ကူမြူနစ် ကြေးမုံဂျီးကို ယွာပြင်ထုပ်ကြ….
uncle gyi says: ဦးကိုကိုလှိုင်ပြောတော့လဲနာလိုက်ကြတာ
ကျောက်မီးသွေးသဘာဝပျက်တယ်ထားလိုက်
ကောင်ပြီဒါဆိုဘယ်လိုနည်းသုံးပြီးဈေချိုချိုထုတ်မလဲ
CharTooLan says: အရမ်းဖက်လို့ကောင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း
အခုမီးပျက်သွားလို့ ပထဝီကုန်သွားပီ နောက်မှဆက်ဖတ်မယ်နော် :D
ဂျစ်စူ says: ဆည်ကြီး အဆင်ပြေနေသမျှ
ကြေးမုံကြီး ကျေးဇူး မမေ့ပါဘူးဗျာ ☺ လဂါးစတာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အားထုတ်ထားတာကတော့ ကျမ်းတမျှ။ လေးစားပါတယ် ။ လူများများ ဖတ်မိပါစေပဲ ဆုတောင်းရတော့မယ်။ ကိုယ်တိုင်တောင် အသေးစိတ် မဖတ်နိုင်ဘူး။ အချိန်လုနေရလို့ပါ။
Ko Nay Nay says: ဟုတ်​​ ​ကောင်းပါတယ်​။ တရုတ်​ပစ္စည်း က မ​ကောင်း​တော့ တခြား နိုင်​ငံတစ်​ခုနဲ့ လက်​တွဲလို့မရဘူးလား။ တရုတ်​နဲ့မှ ဖြစ်​မှာလား။ တကယ်​ကို နိုင်​ငံတကာက စစ်​အုပ်​ချုပ်​​ရေး မ​ကောင်းပါဘူးလို့ ကန့်​ကွက်​​နေချိန်​မှာ တရုတ်​က သူအကျိုးစီးပွားကြည့်​ပြီး နိုင်​ငံသား​တွေရဲ့ ဒုက္ခ ကို မျက်​ကွယ်​ပြုပြီး စစ်​အစိုးရကို အကာအကွယ်​​ပေးခဲ့တာ။ နိုင်​ငံ​ရေး အရ ယုတ်​မာခဲ့သလို စီးပွား​ရေး အ​နေနဲ့ကလည်း နိုင်​ငံကို အမှိုက်​ပုံ​လောက်​သ​ဘောထားပြီး အရည်​အ​သွေး ​အောက်​ဆုံးတန်းပဲ ​ပေး​နေတာ မျက်​ကွယ်​ပြုလို့မရပါဘူး။ တခြားတစ်​နိုင်​ငံကို ရည်​ညွှန်း ​ပေးပါ။ တရုတ်​ကို ဆက်​မ​လော်​သင့်​ပါဘူး။
ဦးကြောင်ကြီး says: မဟုတ်တလှုပ် ကိုလိုနီဟုတ်…
Kyaemon says: မြစ်ဆုံရေကာတာ ဆောင်းပါး တွေကို အလွယ်တကူ
ဘတ်နိုင်အောင် FaceBook ဖေ့ဗုက် မှာ links လင်စ် ၉ ခု ကိုစီထားခဲ့
တယ်၊ FaceBook ဖေ့ဗုက် ကြော်ငြာက မူလစာသားတွေကိုလုံးဝ မ ပေးပြင်လို့
ဒီ ဆောင်းပါး # ၉ မှာဘဲ သူကြီးလို ထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်နော်၊ ——–